Cookies Mutemo (EU)
Natsiridza yako yekunyora maitiro: zvinongedzo ...
Tsamba template: svinura mushandi wako kuchengetedza
Tsamba template: kukumbira kudzoserwa kwemubhadharo ...
Tsamba mamodheru kukumbira kubhadhara kwake iye ...
Siya zvekugadzirwa kwebhizinesi, template yetsamba ye ...
Mhando yepamusoro yekuremekedza maemail ako
Email template yekukumbira ruregerero kune mukuru ...
Excel Data Analysis: Ongorora data ne '...
Kupukunyuka Negativity-Zvidzivirire Iga Asina Kunzwisisa Waves ...
Gara uye shanda muFrance
Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Iyi bumbiro rekuki yakapedzisira kuvandudzwa musi wa 28/06/2021 uye rinoshanda kuvagari nevagari vepamutemo vanogara muEuropean Economic Area.
Webhusaiti yedu, https://comme-un-pro.fr (hereinafter: "webhusaiti") inoshandisa makuki nehumwe hutekinoroji hune hukama (kuitira nyore, ese matekinoroji aya akasarudzwa nezwi rekuti "makuki"). Makuki anoiswawo nevechitatu mapato isu takaita. Mune gwaro pazasi, tinokuzivisa iwe nezvekushandiswa kwemakuki pane webhusaiti yedu.
2. Chii chinonzi makuki?
Cookie idiki, yakapusa faira inotumirwa nemapeji ewebsite ino uye inochengetwa nebrowser yako pane hard drive yekomputa yako kana chimwe chishandiso. Ruzivo rwakachengetwa ipapo runogona kutumirwa kumashure kumaseva edu kana kumaseva evanokosha mapato echitatu pane kushanya kunotevera.
3. Chii chinonzi zvinyorwa?
Chinyorwa chidimbu chekodhi chinoshandiswa kuita kuti webhusaiti yedu ishande nemazvo uye nekudyidzana. Iyi kodhi inoitwa pane yedu server kana pane chako chishandiso.
4. Chii chinonzi mwenje usingaonekwe?
Bhakoni risingaoneki (kana web beacon) chidimbu chidiki chemavara chisingaonekwe kana mufananidzo pane webhusaiti, inoshandiswa kuteedzera traffic pawebhusaiti. Kuti uite izvi, dzakasiyana data nezve iwe dzakachengetwa uchishandisa zvisingaonekwe ma tag.
5.1 Unyanzvi kana anoshanda makuki
Mamwe makuki anovimbisa kuti zvikamu zvewebhu webhusaiti zvinoshanda nemazvo uye kuti zvaunofarira semushandisi zvinoonekwa. Nekuisa makuki anoshanda, tinoita kuti zvive nyore kwauri kuti ushanyire webhusaiti yedu. Nekudaro, iwe haufanire kuisa iwo iwo iwo ruzivo rwacho kakawanda paunoshanyira webhusaiti yedu uye, semuenzaniso, izvo zvinhu zvinoramba zviri mumotokari yako yekutengera kusvikira iwe wabhadhara. Tinogona kuisa makuki aya pasina mvumo yako.
5.2 Statistical makuki
Sezvo zviverengero zvichiteverwa zvisingazivikanwe, hapana mvumo inofanirwa kukumbirwa kuti iise huwandu hwemakuki.
5.3 Kushambadzira makuki
Pane ino webhusaiti isu tinoshandisa kushambadza makuki, ayo anotibvumidza isu kuti titarise mhedzisiro yemhedzisiro yemushandirapamwe. Izvi zvinoitwa pahwaro hweporofita hwatinogadzira zvichienderana nehunhu hwako https://comme-un-pro.fr. Nemakuki aya, iwe, semushanyi wewebhusaiti, wakabatanidzwa kune yakasarudzika ID, asi makuki aya haaratidze hunhu hwako uye zvaunofarira mukushandira kwako kushambadza.
5.4 Kushambadzira / kuteedzera makuki
Kushambadzira / kuteedzera makuki makuki kana imwe nzira yekuchengetera yemuno, inoshandiswa kugadzira profiles mushandisi kuratidza kushambadzira kana kuteedzera mushandisi pane ino webhusaiti kana pane akawanda mawebhusaiti kune chero chinangwa.
Nekuti makuki aya anoiswa mucherechedzo sekutevera makuki, tinokumbira mvumo yako kuaisa.
6. Makuki akaiswa
Isu tinoshandisa Matomo kune webhusaiti manhamba. Read more
Iyi data haina kugoverwa nevechitatu mapato.
Chengetedza yakasarudzika mushandisi ID
Chengetedza yakasarudzika ID ID
Chitoro chinotumira maID
Isu tinoshandisa Complianz yekugadzirisa cookie mvumo. Read more
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota verenga iyo Complianz zvakavanzika chirevo.
Sarudza iyo cookie banner yekuratidzira
Chengetedza cookie mvumo zvaunofarira
Chengetedza kana meseji isina kufuratirwa
Chengetedza iyo ID yemutemo unogamuchirwa wemakuki
Divi (Naka Themes)
Chinangwa chakamirira kuferefetwa, Kunoshanda
Isu tinoshandisa Divi (Yakashongedzwa Themes) dhizaini yewebhusaiti. Read more
Chinangwa chakamirira kuferefetwa
Isu tinoshandisa ET Mupepeti dhizaini yewebhusaiti. Read more
Isu tinoshandisa Pretty Links kune zvemukati manejimendi. Read more
Isu tinoshandisa Yandex Metrica kune webhusaiti nhamba. Read more
Statistics, Chinangwa chakamirira kuferefetwa
Isu tinoshandisa Wistia kuratidza mavhidhiyo. Read more
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota verenga iyo Wistia zvakavanzika statement.
Wisdomtia-vhidhiyo-kufambira mberi- *
Chengetedza kana mushandisi aona zvakaiswa mukati
Kugovana dhata kuri kuongororwa
Paunoshanyira webhusaiti yedu kekutanga, isu tinokuratidza iyo pop-up hwindo ine tsananguro nezve makuki. Ukangodzvanya pa "Sevha zvaunofarira" unotipa mvumo yekushandisa mhando dzemakuki uye ekuwedzera awasarudza muwindows-pop-up, sekutsanangurwa kwazvino mugadziriro yekuki. Iwe unogona kumisa kushandiswa kwemakuki kuburikidza nebrowser yako, asi ndokumbira utarise kuti webhusaiti yedu inogona kusashanda mushe.
7.1 Chengetedza marongero ako emvumo
Kodzero dzako maererano nedata rako pachako
Une kodzero dzinotevera maererano neyako data.
Une kodzero yekuziva kuti nei rako wega data richidikanwa, chii chichaitika kwariri uye kuti richachengetwa kwenguva yakareba sei.
Kodzero yekuwana: iwe une mvumo yekuwana yako pachako data iyo inozivikanwa kwatiri.
Kodzero yekururamisa: iwe une kodzero chero nguva yekupedzisa, kururamisa, ita kuti rako pachako data ribviswe kana kuvharidzirwa.
Kana iwe ukatipa yako mvumo yekugadziriswa kwedata rako, iwe une mvumo yekudzima iyi mvumo uye kuti yako yega data ibviswe.
Kona kuendesa yako data: iwe une mvumo yekukumbira yako yega data kubva kune mutongi uye kuendesa izere kune mumwe mutongi.
Kodzero yekuramba: unogona kupokana nekugadziriswa kwedata rako. Isu tinoteerera, kunze kwekunge paine zvikonzero zvinotsigira kurapwa uku.
Kuti ushandise kodzero idzi, tapota taura nesu. Ndokumbira utarise kune iwo ekudyidzana pazasi peiyi cookies mutemo. Kana iwe uine chichemo pamusoro pemabatiro atinoita data rako, tinoda kuziviswa, asi iwe zvakare une mvumo yekuisa chichemo kumaneja wevatariri (iro dziviriro yedata, senge iyo EDPS).
9.Shandisa / regedza uye bvisa makuki
Iwe unogona kushandisa yako internet browser kuti ubate otomatiki kana nemaoko makuki. Iwe unogona zvakare kudoma kuti mamwe makuki haagoni kuiswa. Imwe sarudzo ndeyekushandura maratidziro ewebhu bhurawuza kuitira kuti ugamuchire meseji nguva imwe neimwe pakaiswa cookie. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve idzi sarudzo, ona rairo iri muRubatsiro chikamu chebrawuza rako.
Ndokumbira utarise kuti webhusaiti yedu inogona kusashanda nemazvo kana makuki ese akaremara. Kana ukadzima makuki mubrowser rako, anozoiswa zvakare mushure mokubvuma kwako paunodzokera kumawebhusaiti edu.
Pamibvunzo uye / kana makomendi pamusoro pekiki mutemo uye chirevo ichi, ndapota taura nesu tichishandisa zvinotevera nhare:
Email : tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Iyi cookie cookies yakawiriraniswa ne cookiedatabase.org 24 / 01 / 2022
kutaurirana kwakanyorwa uye nemuromo - kudzidziswa kwemahara (14) kodzero (161) Yemunhu uye yehunyanzvi budiriro yemahara kudzidziswa (49) Entrepreneurship yemahara kudzidziswa (81) Excel yemahara kudzidziswa (33) Professional kudzidziswa (104) chirongwa manejimendi yemahara kudzidziswa (15) mutauro wekunze kudzidziswa mahara (9) Mitauro yekune dzimwe nyika nzira uye kuraira (22) Software uye Maapplication emahara kudzidziswa (20) Tsamba muenzaniso (19) mooc (171) zvishandiso google zvemahara kudzidziswa (14) PowerPoint yemahara kudzidziswa (13) Yemahara webmarketing kudzidziswa (72) Kudzidziswa kwemahara kwemashoko (13)
Kugadzirisa nekushanda muFrance
Chakavanzika chirevo (EU)
Zvashandiswa huru kugutsikana
KUVARIDZA SIZE YEMAGWARO
KUFUNGA SIZE YEMAGWARO
BEDZA BACK PLAN
KUBATSIRA KUDZIDZA POLITI